Umkhiqizo Wokunethezeka weMalta Uyaqhubeka Nweba
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeMalta Breaking » Umkhiqizo Wokunethezeka weMalta Uyaqhubeka Nweba
Izindaba Ezintsha • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba zeMalta Breaking • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
IHyatt Regency Malta
IMalta, iqoqo leziqhingi elisenkabeni yoLwandle iMedithera, idume ngendawo yokuhlala kanokusho, isimo sezulu esifudumele kanye neminyaka engu-7,000 yomlando. Izivakashi zingawajabulela amahhotela amasha atholakala kuso sonke isiqhingi, kufaka phakathi iValletta, inhlokodolobha yaseMalta, okuyisiza se-UNESCO World Heritage.
Lokhu kuvuleka okusha okunethezeka kufaka phakathi uphawu lomhlaba wonke lokunethezeka kwisipiliyoni esincane se-boutique yomlando. Izakhiwo ezimbili zezinkanyezi ezinhlanu zethule izindawo zazo ezisanda kucatshangwa, zaletha umqondo weSpa neWellness ezingeni elisha lonke.
“IMalta ikhanga kakhulu manje kumhambi ohamba phambili,” kuphawula uMichelle Buttigieg, omele iMalta Tourism Authority eNyakatho Melika, “ngoba ayigcwele kakhulu kunezwekazi laseYurophu,
Ukukhuluma isiNgisi, kunxenxelwa ezinhlobonhlobo zezintshisekelo neminyaka, futhi ngaphezu kwakho konke, kunikeza amathuba amaningi wokuhlangenwe nakho okukhethekile nokhethiwe, ukuqinisekisa imigomo yezempilo ephephile. ”
Kutholakale edolobheni elidumile lolwandle iSt Julian's, iHyatt Regency Malta iyiPied-à-Terre ekahle. Izivakashi zehhotela zingajabulela uhla olugcwele lwezinsiza nezinsiza, kufaka phakathi okwenzekayo okuphekwayo ezindaweni zokudlela ezintathu, izindlela zokwelapha e-spa, nendawo yokusebenza eguqukayo. Impahla yokuqala yomkhiqizo owaziwa umhlaba wonke we-Hyatt Regency eMalta ifaka amakamelo ayi-151, ama-Regency Suites ayi-11, kanye ne-1 Ambassador Suite, enokubukwa kolwandle iMedithera noma ukubukwa okuhle kwedolobha.
Indlu Yesikhumulo Se-Iniala
I-Iniala Harbour House nezindawo zokuhlala
Ebheke eGrand Harbour edumile yaseMalta futhi etholakala eSt.Barbara Bastion yodumo, le ndawo kanokusho inezindlu eziningi zasemadolobheni zaseMalta nezindawo ezimbalwa zasendulo, ezibuyiselwe ngothando ekupheleleni. Kufaka ifenisha eyenziwe ngezifiso, izindwangu ezinhle, namabhalkhoni amahle aseMalta, amakamelo amahle nenamasudi anezikhala anamachibi angasese, konke kugubha ukwakheka kwesimanje okukhombisa ngobuqili ifa nobuhle bukaValletta. Etholakala ophahleni lwendlu oluhle, indawo yokudlela yokuqala yehhotela, i-ION - The Harbour, inikeza ukubukwa okumangazayo kanye nokudla okuyingqayizivele, okuqhutshwa ngumkhiqizo ngumpheki wendawo odumile u-Andrew Borg.
I-Spa ye-Iniala Ihlelwe ukuthi ivulwe ngoMashi 2021. Itholakala endaweni yemilingo yenye yezindawo zokugcina umlando zika-Iniala, le spa inamakamelo okwelashwa aphindwe kabili nodwa, igumbi lesitimu, i-sauna, indawo yokuphumula, kanye nedamu elifudumele. Abelaphi abaqeqeshiwe kakhulu baka-Iniala banikela ngemithi yokwelashwa esezingeni eliphezulu besebenzisa imikhakha nemikhiqizo ehamba phambili embonini, kungaba se-spa noma ngokunethezeka kwesudi yangasese yomuntu. Ukwelashwa nezinhlelo kungenziwa ngezifiso futhi kufaka phakathi ukwelashwa okuphelele okuvela kuzo zonke izingxenye zomhlaba.
Izakhiwo Eziyizinkanyezi Ezihlanu Zicabanga kabusha Ama-Spas Okunethezeka njenge Ama-Oases Wempilo
I-Athenaeum Spa eThe Five-Star Corinthia Palace
Ekuqaleni yavulwa njengendawo yokudlela futhi yaguqulwa yaba yihhotela laseCorinthia ngo-1968, iCorinthia Palace e-Attard isibe yingxenye eyingqayizivele yeMalta - indawo yokubona nokubukwa. Ngemuva kokuvuselelwa unyaka wonke, i-Athenaeum Spa entsha yavulwa kabusha njenge-oasis engamamitha-skwele angama-2,000 XNUMX ayizinyawo ezingadini ezivundile zaseMedithera. I-Athenaeum Spa ecatshangelwe kabusha inikeza izivakashi ukufinyelela ezikhungweni ezehlukile ezibandakanya iVitality Suite eshisayo nedamu, indawo yokusauna kanye negumbi lomphunga, indawo yokucwala izinzipho, amakamelo amahle ayisikhombisa okwelashwa, indawo yokuphumula nethala, kanye nedamu lokubhukuda langaphakathi eline-jacuzzi nelikhulu elingaphandle ichibi. Ngokubambisana ne-ESPA, i-Athenaeum inikeza imikhiqizo yokunethezeka kanye nokwelashwa okwenza izithako zemvelo kakhulu namasiko okuphulukisa aseMalta. Ngenkathi i-Athenaeum Spa ijoyina iphothifoliyo yamanye ama-spa adumile e-ESPA emhlabeni wonke yakhelwe ngesiko elicebile laseMalta engqondweni. Okuhlangenwe nakho okungenamthungo kwangaphakathi nangaphandle kugubha izingcweti zasendaweni kanye nemvelo ethulile yeMedithera, kwakheka indawo ekahle yokuphunyuka ezinkingeni zomhlaba, emzimbeni nasengqondweni.
Kokubili okuyingqophamlando nokuhlehla okunethezeka, iPhenicia ingaphandle nje kwenhlokodolobha enamandla yaseValletta.
The new I-Deep Nature Spa eThe Phenicia Malta yamukela izivakashi ezinendawo yobungcweti nokukhanya kwemvelo. Ukusetshenziswa kwezinto ezifana nezingodo zikadayi, imabula, namatshe aseMalta kunika le spa indawo yanamuhla kodwa engokwemvelo ikwenze kube indawo yokubalekela yangempela yaseMalta. Izivakashi zingaphola ngokubhukuda echibini elingaphakathi, zisebenzele endaweni yokuzivocavoca ngemishini ye-state-of-the-art, noma ziphumule endaweni eyinkimbinkimbi enegumbi likasawoti, i-sauna, igumbi lesitimu namashawa amaningi. Ukubhucungwa okwenziwe ngamehlo noma ukwelashwa kobuso kobuchwepheshe nakho kuyatholakala.
Ngeminye imininingwane mayelana nezakhiwo ezintsha, vakashela https://www.visitmalta.com/en/home, @visitmalta ku-Twitter, @VisitMalta ku-Facebook, naku- @ visitmalta ku-Instagram.
Iziqhingi eziqhakazile zaseMalta, maphakathi noLwandle iMedithera, ziyikhaya lenqwaba ephawuleka kakhulu yamagugu akhiwe kahle, kufaka phakathi ukuminyana okuphezulu kwamaZiko Amagugu Omhlaba we-UNESCO kunoma yisiphi isizwe sombuso noma yikuphi. IValletta eyakhiwe amaKnights aziqhenyayo kaSt.John ingenye yezindawo ezibukwa yi-UNESCO kanye ne-European Capital of Culture yango-2018. Ubuzwe baseMalta ezinsikeni zamatshe ezisuka ezakhiweni zamatshe ezindala ezimahhala emhlabeni, zaya komunye woMbuso waseBrithani izinhlelo zokuzivikela, futhi kufaka phakathi ukuhlanganiswa okunothile kokwakhiwa kwasekhaya, kwenkolo nokwamasosha kusuka ezikhathini zasendulo, zangezikhathi zasendulo, nezasekuqaleni. Njengoba isimo sezulu sibalele kakhulu, amabhishi akhangayo, impilo yasebusuku echumayo neminyaka engu-7,000 yomlando othakazelisayo, kuningi ongakubona nokukwenza. Ngeminye imininingwane ngeMalta, vakashela www.ukasindisow.com.
Izindaba eziningi mayelana neMalta
Izindiza eziningi eziya eBonaire zisuka e-USA eDelta, eMelika ...
Amakhulu Abantu Abagonyiwe Abalaliswe E-UK nge ...
I-Thailand Blind ku-COVID-19 Surge: I-Pushes Phuket Sandbox
Kungani uhamba ngeFinnair ngeHelsinki uye emhlabeni?
Bopha i-Seat Belt noma i-Duct Tape: Ukuphepha okusha kwe-Airline ...
Ukwahluka kweLambda: Umuthi Wokugomela nokuningi ...
I-Jamaica Tourism Ibambe Izingxoxo Ezibalulekile Zokutshala Imali Ngomkhumbi
Usuku Lomhlaba LGBTQ + Usuku Lwezokuvakasha Isitayela sase-Italy
Ukuvakasha eGuatemala naseCancun kwaba lula kakhulu
HEWU! I-BMW 8 Series Gran Coupe Edition Ekhethekile
Izindawo zokuhlala zeCuracao Sandals® zilungele ukubhuka nge ...
Umuthi wokugomela waseRussia Sputnik V COVID-19 uvunyelwe ...
I-Aeroflot ihambisa izindiza eziya eMexico, Jordan, Dominican ...
I-COVID Prank eMoscow Subway Lands I-Video Blogger In ...
Izimbadada Izipho Izipho Ama-Olimpiki aseCaribbean ...
I-Apple ishefa uhlelo lwayo lokuphikisana ukuskena okuyimfihlo ...
I-Air Astana ithola indiza yayo yesithupha ye-Airbus A321LR
UNobhala Wezindaba Wezindiza waseNdiya ...
Ezokuvakasha zaseCaribbean zidlula wonke umhlaba
ISouth African Airways imemezela uMkhandlu Ophethe Wesikhashana omusha
ISeychelles neShanghai Changfeng Ocean World ngokuhlanganyela ...
Ezokuvakasha zaseJamaica Zithumela Induduzo Emndenini weSue ...
Imikhiqizo yePelican ezotholwa yiPlatinum Equity
Abasebenza ezokuvakasha eTanzania bakhipha ukhaphethi obomvu be ...
Ezokuvakasha zaseNdiya Ziphuma Konke Ngefilimu, Ezemidlalo ...
Umbiko omusha we-WTTC unikeza izincomo zokutshalwa kwezimali ...
Abagibeli Traffic Up 378.4% eMoscow Sheremetyevo ...
ISt. Eustatius Yamukela Abavakashi Abagonywe Ngokugcwele
Ezokuvakasha zaseBarbados ziphindelela ngokufika okurekhodiwe ngoJulayi